SparkLite Apk Download Ho an'ny Android [lalao] - Luso Gamer
Efa nanonofy ve ianao hamonjy izao tontolo izao amin'ny monsters? Raha eny dia izao no fotoana tsara indrindra hamonjena an'izao tontolo izao amin'ny fanehoana fihetsika hendry sy mahery. Noho izany dia vonona ny hankafy ity traikefa 2D tsy mampino ity ianao dia misintona SparkLite Apk.
Ny fampiharana lalao dia maimaimpoana maimaim-poana alaina eto miaraka amin'ny safidy kitihina iray. Ny lalao dia manankarena amin'ny endri-javatra anisan'izany ny sary HD. Aiza no hankafizan'ny mpilalao ny tontolo tena misy mampiseho fitondran-tena sorona amin'ny alàlan'ny fandaozana ny sambo.
Noho izany dia niandry ny kinova android tany am-boalohany ianao ary tsy afaka miditra tsara ny rakitra. Afaka miditra amin'ny rakitra Apk tany am-boalohany ianao izao. Kitiho fotsiny ny bokotra rohy fampidinana nomena ary miditra ho azy ny Spark Like Apk.
Inona ny SparkLite Apk
SparkLite Apk dia fampiharana lalao an-tserasera manankarena amin'ny endri-javatra misy fampisehoana HD. Ankoatra ny fampidirana endri-javatra fototra, ny lalao dia tsara amin'ny fanomezana basy sy bala mandroso. Amin'ny fampiasana ny fitaovam-piadiana, ny mpilalao dia afaka mamongotra mora foana ny monsters.
Nantsoina hoe Geodia ny tany nipetrahan’ilay sambo. Ny antony nandaozany ny sambon-danitra dia noho ny olana ara-mekanika sasany. Na dia miezaka mafy mamaha ny olana aza ny robot sy ny maherifo. Tsy afaka mamaha ilay olana anefa izy ireo.
Mitombo ny hafainganam-pandehan'ny sambon-danitra ary toerana tokana ihany no azon'ny maherifo hipetrahana soa aman-tsara. Noho izany dia nanapa-kevitra ny handroaka ny sambon-danitra izy amin'ny fampiasana ny fahafahana. Ary nipetraka soa aman-tsara teo amin'ny Geodia tsy niteraka fahavoazana. Tsarovy fa misy koa ny malaza eo an-toerana.
Saingy matahotra ny titans sy ny biby goavam-be ny mponina. Tsy manana fahefana hamongorana ireo biby goavam-be ireo izy ireo. Ankehitriny ny hany fanantenana dia zazalahy ary mampiasa ny faharanitan-tsainy hamonoana ny titans sy hamonjy izao tontolo izao. Noho izany dia vonona ny hankafy premium ianao Lalao RPG traikefa dia apetraho ny SparkLite Game Download.
Anaran'ny fonosana com.playdigious.sparklite
Raha nandinika vetivety ny lalao dia hitanay fa manankarena amin'ny endri-javatra misy ny safidy. Mba hahatonga ny lalao ho azo antoka sy mahaliana, dia ampiana ireo endri-javatra fototra samihafa. Anisan'izany ny Harness, Exploration, Befriend, Save, Enjoy and Invent.
Ny mpilalao dia asaina mikaroka ireo toerana miafina ao anatin'izany ny indostria, ny harena ankibon'ny tany, sns. Ary mora ampiasaina ny SparkLite mba handresy sy hamono ny Monsters anisan'izany ny Titans. Ilaina ny fikarohana mba hahitana ny tany mamiratra sy miloko.
Ireo izay vaovao amin'ity lalao ity dia tsy maintsy mikaroka sy mamorona fitaovam-piadiana. Izay apetraka amin’ny toerana miafina toy ny fitrandrahana. Taty aoriana dia mampiasa ny arsenals azo mba hamahana ny piozila. Izany dia manampy amin'ny fandresena ny fahavalo amin'ny farany ary lasa matanjaka kokoa.
Araka ny efa nambarantsika teo aloha dia misy koa ny mponina any an-toerana. Ary manoro hevitra ny mpilalao izahay hanandrana hanorina fifandraisana tsara amin'ny mponina eo an-toerana. Hanangana fialofana sy hitadiavana mora ireo olona nilaozana ao amin'ity trano fialofana ity. Tsarovy fa ny teboka misy ny zava-bita dia azo jerena amin'ny safidy manokana.
Noho izany dia vonona ianao hamonjy ny ain'ny mponina ao an-toerana anisan'izany ny Mpitsoa-ponenana. Avy eo ianao dia misintona ny kinova farany indrindra amin'ny SpartLite Full Apk avy eto. Ary ankafizo ny fijery tena misy amin'ny endrika ultra HD nefa tsy misy olana.
Mora ny mametraka ao anaty smartphone android.
Ny fametrahana lalao dia manome fahafahana maro.
Tafiditra ao anatin’izany ny fitrandrahana ny tany mamiratra sy miloko.
Ampiasao ny angovo SparkLite hamongorana ny Monsters sy Titans.
Miezaha manorina fifandraisana tsara amin'ny mponina eo an-toerana.
Ny safidy Cloud Save dia ahafahan'ny fizarana fandrosoana amin'ny mpilalao android hafa.
Advanced Controller System miaraka amin'ny rafitra fandoavam-bola milamina.
Ahoana ny fametrahana SparkLite Apk
Amin'izao fotoana izao dia azo alaina amin'ny Play Store ny fampiharana lalao. Na izany aza, maro amin'ireo mpilalao Android no manoratra ity fitarainana ity momba ny olana tsy azo idirana. Ny antony dia mety mifandray amin'ny famerana ny firenena.
Saingy eto amin'ny tranokalanay dia nesorina tanteraka ireo fameperana lehibe rehetra ireo. Midika izany fa afaka mankafy ny fidirana mivantana amin'ny rakitra Apk ny mpilalao android tsy misy fahazoan-dàlana. Noho izany dia liana ianao ary vonona ny hisintona ny Spark Lite Android dia tsindrio ny rohy nomena.
Ny fampiharana lalao atolotray dia ofisialy ary afaka misintona azy mora foana eto ny mpilalao. Ny fametrahana sy ny fampidirana ny gameplay dia tsotra. Tsindrio fotsiny ny rohy nomena ary hametraka mora foana ny lalao tsy manahy.
Milaza ny manam-pahaizana fa milalao an-tsehatra ity lalao ity. Ary eto amin'ny tranokalanay dia efa namoaka lalao maro hafa izahay. Noho izany dia vonona ny hijery ireo lalao hafa mitovy amin'izany ianao dia tsy maintsy manaraka ny rohy. Ireo dia MIR4 Apk ary Blockman Go Adventures Apk.
Noho izany dia sendra olana ianao amin'ny fampidinana ny rakitra Apk avy amin'ny loharano ofisialy. Ary mitady loharano hafa tsara indrindra. Avy eo amin'ity lafiny ity, manoro hevitra ireo mpilalao Android ireo izahay misintona SparkLite Apk ary mankafy lalao tany am-boalohany tsy misy fameperana.
Sokajy Role Playing, Games Tags Lalao RPG, Spark Lite Apk, SparkLite Apk, SparkLite Full Apk, Lalao SparkLite Download Post Fikarohana
Rummy Modern Apk Download Ho an'ny Android [Filoka an-tserasera]